बिचार – Namaste Host
June 6, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on सर्लाहीकि सोनिया पान्डे5महिना देखि Blood Cancer लेपिडित छ सके सहयोग नसके Get Well Soon लेखेर
सर्लाहीकि सोनिया पान्डे5महिना देखि Blood Cancer लेपिडित छ सके सहयोग नसके Get Well Soon लेखेर सर्लाही जिल्ला लालबन्दी 1 निबासी बिपिन अर्याल को बिबाह मात्रै दुई बर्स अघि भयको थियो र अहिले निज को श्रीमति सोनिया पान्डे (अर्याल) बर्स 23 कि लाई ब्लड क्यान्सर भयकोले गर्दा हाल5महिना देखि Blood And Multispeciality […]
June 5, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on धेरै वर्षौंपछि बाबले फोन गर्नुभयो, मैले नबोली का’टिदिए ।” – पुजा शर्मा (भिडियो हेर्नुस्)
नायीका पुजा शर्माले आफुलाई पि’ताको बोलि सुन्नै मन न’पर्ने बताएकी छन् । उनले आफु सानो हुदा बुबाको काख,साथ,सहयोग र सा’हारा चाहिएको थियो त्यो समयमा नपाएको साथ अब नचाहिने बताएकी छन् । वुवाले आमालाई ति’र’स्का’र गरेका कारण आमासंग मात्रै बस्दै आएकी पु’जाको सं’घर्षको जिवन छ । पुजालाई आमा एक्लैले हु’र्काएकी हुन् । पुजा छोरी भएर जन्मेको […]
May 14, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on यो एक बार जन्मेका व्यक्तिले कमाउँछन् अत्याधिक धन
April 12, 2021 April 12, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on बाबु बन्न लागेको संकेत गर्दै महानायक राजेश हमालले फेसबुकमा लेखे यस्तो स्टाटस…
काठमाडौं । नेपाली चलचित्रका महानायक राजेश हमालले आफु बाबु बन्न लागेको संकेत गरेका छन् । मधु भट्टराईसँग विवाह गरेका हमालले सामाजिक सञ्जालमा आफु बाबु बन्न लागेको संकेत गरेका हुन् । नायक हमालले आफ्नो इन्स्टाग्राममा श्रीमति मधुसँगको तस्बिर राख्दै लेखेका छन्, ‘१+१= ?’ । यदी उनी बाबु बन्न लागेको हुन् । भने उनलाई ‘बाबु कहिले बन्नु […]
ललितपुर-गोदावरी नगरपालिका– १३ झररुवासीमा अवस्थित सन्तानेश्वर महादेव मन्दिरप्रतिको आकर्षण दिनानुदिन बढ्दै गएको छ ।ललितपुरको लगनखेलबाट पूर्वी दक्षिणी भेगमा राजधानी नजिकै पर्ने सो मन्दिरमा पूजाराधनाका लागि सोमबार व्रतालु भक्तजनको भीड लाग्ने गरेको छ । विशेष गरेर साउनको हरेक सोमबार अझ बढी भक्तजनको उल्लेखनीय सहभागिता हुने गर्छ । सतीदेवीको ओठ पतन भएकाले सो क्षेत्रमा सन्तानेश्वर महादेवको उत्पत्ति […]
March 26, 2021 March 26, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on इच्छा अनुसार छोरा वा छोरी जन्माउने तरिका यस्तो रहेछ (भिडियो)
सन्तान जन्माउनका लागि हिन्दू धर्म दर्शनमा विभिन्न तर्कहरु उल्लेख गरिएको छ । विशेषत वेदमा छोरा वा छोरी जनमाउनका लागि गरिने विभिन्न विधि, ब्रतको उपाय अपनाइएको छ । कोही सन्तान नभएर, छोरा नभएर र त कोही छोरी नभएका कारण चिन्तत हुनुहुन्छ भने शास्त्रमा उल्लेख गरिएका विधि प्रभावकारी हुने आस्तिकहरुको विश्वास छ । यसका लागि हिन्दू धर्म […]
March 7, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on भाग्यमानीहरू मात्र जन्मिन्छन यि बार,तपाई कुन बार जन्मिनुभएको ? हेर्नुहोस्
आइतबार : पुरुष : आइतबार जन्मिने मानिस भाग्यशाली हुन्छन् । उनीहरुको आयु पनि लामो हुन्छ । यस्ता ब्यक्ति कम बोल्ने र कला र शिक्षामा अगाडी हुन्छन् । यो बार जन्मिने ब्यक्तिमा धार्मिक आस्था पनि हुन्छ र घर परिवारका सदस्यलाई खुसी राख्न अधिक प्रयास गर्छन् । तर यिनीहरुलाई २० देखि २२ वर्ष सम्म दुःख हुन्छ । […]
March 7, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on नियमित शारीरिक सम्बन्ध राख्ने महिला कसरी चिनिन्छन् ?
महिलाहरु प्राकृति रुपमा नै आफैमा सुन्दर हुन्छन् । उहीहरुको सुन्दरताको सदाबहार तारिफ नै हुन्छ । तर पुरुषको तुलनामा महिलाको शारीरिक बिहे लगत्तै नै प’रिवर्तन भइहाल्छ । के कारण छ त्यसको पछाडी ? सर्वे युनिभर्सिटी अफ लिड्स का सो’धकर्ताले हालै गरेको अध्ययनका अनुसार निय’मित स’हवास गर्ने महिलाको शारीरिक ब’नावट केही मात्रामा परिवर्तन भए पनि एक दिनमा […]
किच्कन्याको कथा धेरैले सुनेको हुनुपर्छ । कतिपयले किच्कन्या भेटेको या किचकन्याले लखेटेको भन्ने गरेका छन् । किच्कन्या नेपाल र भारतीय समाजमा प्रचलित किम्वदन्ती र कथाहरुको भूत हो । यसले महिलालाई कुनै हानीनोक्शानी पुर्याउँदैन पुरुषलाई भने हानी पुर्याउनेगरेको विश्वास छ । भारतमा चुडैल पनि भन्ने गरिन्छ । तर, चुडैलभन्दा किचकन्या केही भिन्न मानिन्छ । यसले हानी […]
काठमाडौं । पुरुषहरु बाहिरबाट क-ठोर स्वभावको देखिए पनि उनीहरु भित्रबाट निकै नै कोमल हृदयका हुन्छन् । भन्न त धेरैले सजिलै भनिदिन्छन्, ‘म-र्दलाई सानो तिनो कुराले छुँदैन’ तर, के साँच्चै यो कुरा सही हो त ? पुरुषहरुको जीवनशैली र स्वास्थ्यसँग जोडिएका यस्ता धेरै तथ्यहरु छन् जुन उनीहरु आफैंले पनि जान्दैनन् । आज हामी तपाईंलाई पुरुषहरुसँग जोडिएका […]